ဒီနေ့ နှင့်သူ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » ဒီနေ့ နှင့်သူ	9
Posted by Sine Sant on May 21, 2015 in Creative Writing, Drama, Essays.., Ideas & Plans, My Dear Diary |9comments
ဒီနေ့ သူ့ စိတ်ထဲမှာ လေးလံနေသည် ။
မနက် ကနေ ညထိ သူ့ ကိုယ်သူ့ ဆန်းစစ်ကြည့်နေမိတယ် ။
ဘာအပြစ်တွေ လုပ်မိထားလည်း ၊ ဘယ်သူ့ အပေါ်စကားပြောမှားထား သလဲ ပြန်စဉ်းစား ကြည့်သည် ။
ကြီးကြီးမားမား စိုးရိမ်နေစရာ ဘာမှမရှိ ခဲ့ ။ သူ့ မောင်နှမ တွေ လိုအပ်တဲ့အကူ အညီတွေကိုအကောင်းဆုံး ဖြစ်အောင်သူ မစွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့သော ကိစ္စအတွက်သော
စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်နေတာတော့ မှန်ပါသည် ။
သူ ဘာဖြစ်နေသလဲ ။ မနေ့ ကအကြောင်းကို ပြန်စဉ်းစား မိတော့ . .
.သူ ရုံးသို့ လာသည့်လမ်းတွင် လူတစ်ယောက် ကားတိုက်ခံလိုက်ရသည်ကို တွေ့့ခဲ့သော်လည်း
သွားကူညီပေးဖို့ ရာ တွန့် ဆုတ်ခဲ့မိသည် ။ သူ တွန့် ဆုတ်ခဲ့ရခြင်းတွင်အကြောင်းပြချက်ပေါင်းများစွာရှိခဲ့သော
ကြောင့်ဟု သူ့ ကိုယ်သူ နှစ်သိမ့် ထားခဲ့ပြီးဖြစ်သည် ။
ထို လူနာကို ကူညီပေးလိုက်မိသည်နှင့် ပထမဆုံး သူ ၏အလုပ်ချိန်ထိခိုက်တော့မည် ၊ ရာထူးတိုး နိုင်ရန် ကြိုးစားနေချိန်လည်းဖြစ်သည် ။ သေရေးရှင်ရေးကိုကူညီ ပေးနေသည့်အတွက်ကြောင့် ရုံးနောက်ကျခြင်းကို သဘောထား ကြီးသည့် လူကြီးနှင့်တွေ့ မှအဆင်ပြေနိုင်သည် ။ နောက်တစ်ချက် မှာ ထိုယာဉ်တိုက်မှု ပြဿနာတွင် ပါဝင်ကူညီပေးခဲ့ သောကြောင့် အစိုးရ ရဲ များ၏ခေါ်ယူစုံစမ်းစစ်ဆေး ခြင်းကိုလည်း ခံရမည် ၊
ရဲများ၏စစ်ဆေးမေးမြန်းခြင်းမှာရက်တိုတိုနှင့် ပြီးဆုံးခဲ့လျှင် အကြောင်းမဟုတ် သူ့ နှင့်ဘာမျှမပတ်သက်သည့် အမှုကိစ္စအတွက် သူ့ အချိန်များကို အလာဟသတ်
ကုန်ဆုံးမခံနိုင် ။ အကယ်၍ ထိုလူနာ မှာ သူ့ လက်ပေါ်တွင် အသက်ဆုံးသွားခဲ့လျှင် သူ ဆက်မတွေးရဲ ပါ။ ဓါးခုတ်ရာလက်ဝင်လျို သလိုဖြစ်နေနိုင်သည် ။
သူ မဟုတ်လည်းအခြားသူတစ်ယောက် အကူညီပေးနိုင်လိမ့်မည်
ဟုလည်း မျှော်လင့်ထားလိုက်သည် ။ လူမှုရေးနှင့် စီးပွားရေး ပြဿနာကြားတွင် သူ့ ဘဝ ကိုသူ စိတ်ပျက်ငြီးငွေ့ 
ခဲ့ရပေါင်းလည်းများလှပါပြီ ။ လူသားထဲကလူတစ်ယောက်ဖြစ်နေသည့်
အတွက်ကြောင့်လည်း မလွန်ဆန်နိုင်သော လူမှုဒုက္ခ များစွာကိုကြုံတွေ
တခါတလေ သူ့ အတွက်စိတ်ဖိစီးမှုတွေကို ပိုခံစားမိလာသည် ။
သူ့ မှာမိသားစု ရှိသေးသည် ။
သူ့ အပေါ်လုံးဝအားကိုး နေရသည်တော့မဟုတ် ပေမယ့် သူ့ ကြောင့် မိသားစုဝင်
များ စိတ် ရှုပ် အလုပ်ရှုပ်ကြရမှာကိုတော့ သူ မဖြစ်စေချင်ပါ။ သက်ဆိုင်ရာ ရဲအရာရှိများရောက်မလာခင်တွင်အမှုအခင်းဖြစ်သော နေရာများမှမည်သည့် အရာကိုမျှ
ကိုယ်နဲ့ မသက်ဆိုင်လျှင် မထိမကိုင် ရဟုသူကြားဖူးထားပါသည် ။ှ
ထို့ ကြောင့် ထိုအဖြစ်အပျက်အား ရှက်ရွံ့ အားနာစွာပဲ မျက်နှာလွှဲ၍ ဖြတ်ကျော်ခဲ့ပါသည်။
သူ့ စိတ်ကိုလေးလံထိုင်မှိုင်းနေစေသည်မှာ ဤအဖြစ်အပျက် လည်း များစွာပါဝင်လွှမ်းမိုးနေသည် ကိုဝန်ခံ ပါသည် ။
မနေ့ ကလည်းထိုမြင်ကွင်းကြောင့် စိတ်ရှုပ်ထွေးခဲ့ရပြီး
ယနေ့ ထိလည်း သူ့ စိတ်ထဲကထွက်မသွားနိင် သေးပါ ။
သူ့ မှာမလုပ်ရသေးသောအလုပ် ၊
ဖြစ်မလာနိုင်သေးသော ဆန္ဒ များ ၊
သူ အရချင်ဆုံး ဘဝ တွေ ရှိသေးသည် ။
အခု ချိန် သူ့ ကိုယ်ပိုင် အိမ်တစ်လုံး ဝယ်နိုင်ဖို့ ရန် သူတော်တော်
ကြိုးစား ရဦးမည် ။ထို့ အတွက် သူ ရင်မောနေရသည်။ သူ့ မှာ ပြုစုပျိုးထောင်ပေးရန် မကင်းရာမကင်းကြောင်း ဆွေမျိုးနီးစပ် ရှိသေးသည် ။
မိဘ နှစ်ပါး နှင့် ကျေးဇူးရှင်များအပေါ် လည်း သူ တာဝန်မကျေသေး ပါ ။ သူ့ အနာဂါတ် ရှေးရေး ကို မျှော်တွေးလိုက်မိလျှင် လည်း သူ့ ကိုယ်သူ
အားမရ နိုင်သေး ၊ တခါတလေ သူ့ ဘဝကို စိတ်ပျက်မိနေမိသော အချိန် များ လည်းရှိနေသေးသည် ။
အတိတ်က အကြောင်းအရာတချို့ ကလည်း သူ့ စိတ်ဓာတ်ကို ကျဆင်းသွားနိုင် အောင် ဖန်တီးနေနိုင်သေးသည် ။ ဆိုပါစို့ …အကယ်၍ ဆယ်တန်းစာမေးပွဲတွင် သူအမှတ်များများ နှင့်အောင်မြင် ခဲ့မည်ဆိုလျှင် သူ ဝါသနာ ပါသော အလုပ် တနည်းအားဖြင့် ယခု ထက်အဆင့်အတန်း ရှိသော အလုပ်ကို သူပိုင်ဆိုင် ခွင့် ရှိခဲ့မည် ဖြစ်သည် ။ ယခုအချိန်သူ့ ကို ဆုတစ်ခုတောင်း၍ ပြည့်မည်ဆိုလျှင် ဆယ်တန်းဘဝကိုပြန်သွားပြီး ပြင်ဆင်ခွင့် ရချင်သည် ။
မဖြစ်နိင်တော့သည့်အတွက် သူ ၏ဆိုးမိုက်ခဲ့သော ရလဒ် များ ကို နောင်တ များအဖြစ်သာ ခံစားနေရုံ မှ လွဲ၍ ဘာမျှ မတတ်နိုင်တော့ပါ ။
” အလုပ်ဟူသမျှ ဂုဏ်ရှိစွ ” ဆိုသောစကားမှာ ကျောင်းဖတ်စာအုပ် နှင့် လူတို့ ၏ပါးစပ်ဖျား တွင်းသာ ရှိသည်ဟု
ထင်ပါသည် ။် လူတစ်ယောက်၏အလုပ်အကိုင် ကို ကြည့် ၍ လူအချင်းချင်းအဆင့်အတန်း သတ်မှတ် နေသည် ။ကိုယ်ပိုင်အလုပ်တစ်ခု ကိုအခြေတကျလုပ်ချင်သည် ။ အစိုးရဝန်ထမ်းဖြစ် ဖြစ် ၊ ပုဂ္ဂလိက ဝန်ထမ်း ဖြစ်ဖြစ် ဘယ်ဝန်ထမ်း အလုပ်ကိုမျှမလုပ်ချင်တော့ပါ ။ သူတပါး ၏ဝန်ထမ်းဖြစ်ရသည်မှာ ကိုယ့်အချိန်တွေကို သိလျက်သားနှင့်အခိုးခံနေရသလို ပါပဲ ။ ကိုယ့်ကြိုးစားမှုပေါ်မူတည်၍နာမည်ကောင်းသာရချင် ရလာလိမ့်မည် ကြီးပွားတိုးတက်ဖို့ တော့ “ရွှေပြည်တော် မျှော်တိုင်းဝေး”ရမည့်အဖြစ်နှင့်သာဘဝတွေအဆုံးသတ်ဖို့ ရှိပါသည် ။သူ့ အချိန်တွေကိုသူပိုင်ချင်သည် ။စိတ်တိုင်းကျဘဝကိုတည်ဆောက်ချင်သည် ။ အသက်အရွယ်ကြီးခါမှ သူတပါးလက်ညိုးထိုးခိုင်းသမျှကို ခေါင်းလေးငုံ့ ၍ “ဟုတ်ကဲ့ ခင်ဗျ ဟုတ်ကဲ့ ” ဆိုတဲ့စကားသာပြောနေရ ရင် သူ့ ဘဝဟာ လူဖြစ်ရှုံးနေရလိမ့်မည် ။ အစွမ်းအစ မဲ့ခဲ့သော ကိုယ့်အဖြစ်ကိုလည်း ရှက်လို့ ဆုံးမည်မဟုတ်တော့ပါ ။ ထို့ ကြောင့် သူ့ ကိုယ်ပိုင်စီးပွား ရေးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ရန် သာ ဆန္ဒပြင်းပြ နေမိသည်။ သေးသေးလေးကပဲ စရ စရ . အောက်ခြေကပဲစရ စရ တခုခုတော့ သူလုပ်မှ ဖြစ်တော့မည် ဟု ထင်သည် ။
ဖြစ်မလာသေးသောအနာဂါတ်များကို တေွးတော ရင်းဖြင့် သူ ၏ အိပ်ပျက်ည များ စွာကို ခက်ခဲပင်ပမ်းစွာ ကုန်လွန် ခဲ့ရသည် ။ ပြန် ပြင် လို့ မရနိုင်တော့သော အတိတ် များကြောင့်လည်း သူ
သက်ပြင်းချခဲ့ ရပေါင်းလည်း များခဲ့ပြီ။
အတိတ်ကို အတိတ်မှာ မထားခဲ့နိုင် သော
နောင်ဖြစ်လာမည့် အနာဂါတ် အရေးကို ကြို တင်
စိတ်မောပင်ပမ်းနေ ရသော အဖြစ်များ သည် သူ့ ကိုယ် သူ
စိတ်ဒုက္ခများ သာ ဖန်တီးနေခြင်းကိုသာ ဖြစ်စေခဲ့သည် ။
ဘယ်အရာကိုမှ ကြိုတွေးပြင်ဆင်ထား ခွင့် မရှိသော လူ့ ဘဝ မှာ
မရှိ့်ိသော လူတစ်ယောက်သာ ဖြစ်သည။်
ထို့ ကြောင့် လက်ရှိရင်ဆိုင်နေရသော ပစ္စုပ္ပန် တွင် အကောင်းဆုံး နေထိုင် အသက်ရှင် ဖြတ်သန်းသွား ဖို့ သည်သာ
သူ့ အတွက် အခွင့်ထူးဖြစ်သည် ဟူ၍နားလည် ထားဖို့ 
ရန်သာ အလိုအပ်ဆုံး ဖြစ် ပါတော့သည် ။ သူအတွက် ဒီနေ့ အကောင်းဆုံးအသက်ရှင်ခြင်းသည် သူ ရင်ဆိုင် ရမည့် မနက်ဖြန်အတွက် အကောင်းဆုံး ဆုလက်ဆောင် များ ယူဆောင် လာနိုင် မည်ဖြစ်သည် ။ သူ့ စိတ်ကိုအကောင်းဆုံး
ရွေးချယ်မှုတစ်ခုအတွက်သူ့ ကိုယ်သူ အလုပ်ပေးလိုက်တာကတော့ သူအသက်မသေ
မချင်း အောင်မြင်မှုတစ်ခုအတွက် လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေရှိသေးတယ် ဆိုတာပဲ ။ သူ တွေဝေ ခဲ့မိသောအချိန်တွေ က နှစ်ပေါင်းများ ခဲ့ပါပြီ ။
မနေ့ ကတော့ ပြီးဆုံးကျန်ရစ်ခဲ့ပြီမို့ ဆက်တွေးပြီးနောင်တရနေဖို့ မလိုအပ်တော့ ဘူး ။
မနေ့ ကရခဲ့တဲ့ ဗဟုသုတအတွေ့ အကြုံကိုတော့ ဒီနေ့ နဲ့ မနက်ဖြန်တွေမှာအကောင်း
ဆုံးအသုံးချနိုင်ဖို့ ပဲလိုအပ် တယ် ။ မနက်ဖြန်ရှိနေလိမ့်မယ်ဆိုတာ ဘယ်သူ့ 
အတွက်မှ မသေချာလို့ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရုံကလွဲလို့ စိတ်သောကဖြစ်နေဖို့ မလိုအပ်ဘူး ။
ဒီနေ့ ဟာ အကောင်းဆုံး ပဲ ။ လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တဲ့ ကိစ္စ တွေမှာ ဒီနေ့ ပဲစလုပ်သင့်ပြီ လို့ 
သူ့ ကိုယ်သူ ဆုံးမ ထားလိုက်ပါတယ် ။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုအပြည့် ရှိနေဖို့ တော့ လိုတာပေါ့ ။ lulu
Alinsett @ Maung Thura says: မနေ့က ဆိုတာ ပြီးသွားပြီ…
ဒီနေ့…. ပျော်ရွှင်အောင် နေမယ်…ကောင်းမွန်စွာ နေထိုင်မယ်…
ခင်ဇော် says: ဒီ အချိန် ဟာအကောင်းးဆုံးး အချိန်
အောင် မိုးသူ says: ဖတ်မိပြီးတော့ စောနက ဖေ့ဘုတ်မှာတက်လာတဲ့ အမေရိကန်မှာဖြစ်ပျက်သွားတဲ့ အဖြစ်အပျက်လေးကို မြင်မိပြန်တယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော် ကြိုးစားရုန်းကန်နေရတာပဲ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော်ကတော့ စိတ်ညစ်စရာရှိရင်တောင် အားတင်းပြီး ဖြေရှင်းတယ် အကောင်းဆုံးလုပ်တယ်။
မြစပဲရိုး says: တကယ်ဖြစ်သင့်တာကလဲ အဲလို ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်ရင် ကိုယ်လဲ ဘာမှ မလုပ်တတ်တာ၊
အကောင်းဆုံးက ဆေးရုံကား ကို ခေါ်ပေးဖို့ဘဲ။ ဆေးရုံကား အမြန်ရောက်ဖို့ တော့လိုတာပေါ့။
တစ်ခါတစ်ခါ ဒီနေ့ မှာ ဖြစ်ချင်တိုင်း မဖြစ်လိုက်တာ တွေ က နောက်နေ့အတွက် ပိုကောင်းတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
စိတ်ဓာတ်မကျဘဲ ပိုပြီး ကြိုးစား နိုင်ဖို့ဘဲ လိုတာပါ။
” ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုအပြည့် ရှိနေဖို့ တော့ လိုတာပေါ့ ” ။
အဲဒါကလဲ ကြိုးစားတဲ့ အကြောင်းပြီးမှ ရလာမဲ့ အကျိုးပါ။
တစ်ခါတစ်ခါ လဲ ကိုယ့်ကံ ကို လဲ ယုံပါ။
အဲဒီ အတွက် ကတော့ (မှန်ကန်တဲ့) ဘာသာရေး နဲ့ မိဘ ဆရာ ကို ကျေးဇူးသိတတ်ခြင်းလို့ ထင်ပါတယ်။
lu lu says: ကျေးဇူးပါအရီးခင်ရယ် တခါတလေ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအားမရဘူး
စိတ်ဓာတ်ကျတဲ့အချိန်တွေဆို ဘယ်သူ့ ကိုဖွင့်ပြော ရမှန်းမသိဘူး
အားပေးမယ့်သူ ကိုရှာရင်း ကိုယ့်ကိုယ်ပဲအားပေးလာခဲ့တာ
အားတင်းထားနိုင်တာ ပါလို့ ပဲပြောချင်ပါတယ်
sorrow says: ထို့ ကြောင့် သူ့ ကိုယ်ပိုင်စီးပွား ရေးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ရန် သာ ဆန္ဒပြင်းပြ နေမိသည်။ သေးသေးလေးကပဲ စရ စရ . အောက်ခြေကပဲစရ စရ တခုခုတော့ သူလုပ်မှ ဖြစ်တော့မည် ဟု ထင်သည် ။
အဲ့တာလေးပြောချင်တာပါခင်ဗျ…. စလိုက်ပါခင်ဗျ ..စမယ်စိတ်ကူးရင်Dead line လေးထား စပြင်ဆင်ပါတော့ခင်ဗျ…
အောင်ပွဲဆိုတာကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသူတွေသာ သီးသန့်ပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာ …
Ma Ma says: ဘ၀ရဲ့ရည်မှန်းချက်က ဆရာမဖြစ်ချင်ခဲ့တယ်။
ဒါပေမယ့် မိဘလုပ်ငန်းကလည်း ကိုယ့်ကိုလိုအပ်လေတော့ မိသားစုကို ဦးစားပေးပြီး ၀ါသနာကို စွန့်လွှတ်ခဲ့ရတယ်။
ခုချိန်မှာပြန်တွေးလိုက်တော့ ၀ါသနာကိုဦးစားပေးခဲ့ရင်လည်း အခက်အခဲတွေ ပြဿနာတွေအများကြီး ကြုံရမယ်ဆိုတာမြင်လာပြီး ကိုယ့်ဘ၀ကိုယ် ကျေနပ်မိတယ်။
ကိုယ့်နေရာကို စိတ်တိုင်းမကျလို့ ပြောင်းမယ်ဆိုရင်
ဘ၀မှာ လောကဓံဆိုတာ ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြုံရမှာပဲဆိုတာ ကြိုတွေးထားစေချင်ပါတယ်။
ဦးကြောင်ကြီး says: ကေအိုင်အေလုမ
aye.kk says: မှန်ပါတယ်